दुध कसरी पिउने हो ? यसलाई कतिबेला पिउदा फाइदा जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
Don't Miss it स्वास्थ्यमा हानी पुर्‍याउने साधारण आनीबानी यी हुन्
Up Next दाँतमा किरा लाग्ने समस्या छ ? दाँतको किरा मार्ने अचुक घरेलु उपाय
किन गर्भावस्थामा अण्डा खानु पर्छ ? जान्नुहोस
गर्भावस्था एकदमै सम्बेदनशिल समय हो । यस बेला प्रत्येक गर्भावाती महिलाले आफ्नो शरीरको ख्याल राख्नु पर्छ । आफ्नो घर परिवारका सबै सदास्यले…